पुस्तक हरेक एनालिटिक्स प्रोफेशनल पढ्नु पर्छ Martech Zone
पुस्तक हरेक एनालिटिक्स प्रोफेशनल पढ्नु पर्छ
सोमबार, जनवरी 23, 2012 सोमबार, जनवरी 23, 2012 Douglas Karr
केही वर्ष पहिले मेरो राम्रो साथी प्याट Coyle, जो एक खेल बजार एजेन्सी, मलाई पढ्न प्रोत्साहित गर्‍यो मनीबल। एउटा कारण वा अर्को कारणले गर्दा, मैले पुस्तकलाई पठन सूचीमा राखिन। केही हप्ता अघि मैले चलचित्र हेरें र तुरुन्तै पुस्तकलाई अर्डर गरें ताकि म कहानी अझ गहिरो गरी सक्दिन।
म खेलकुद मान्छे होइन ... तपाईं पनि नहुन सक्नुहुन्छ। मँ कतै कुनै कलेज वा पेशेवर खेलकुदको बारेमा उत्साहित हुन्छु जबसम्म यो एक राम्रो स्ट्यान्ली कप हो। यदि तपाइँ खेलकुदको कदर गर्नुहुन्न तर तपाइँ संख्या, तथ्या .्क र विश्लेषण मन पराउनुहुन्छ, तपाइँ अझै यो पुस्तक पढ्नु पर्छ। पल डेपोडेस्टा (जोनाह हिलले खेलेको फिल्ममा उनको पात्र पिटर ब्रान्ड हो) अपरेसनको दिमाग हो ... लक्षित खेलाडीहरू पहिचान गर्न तथ्या from्कबाट काम गर्दै तिनीहरूको आधारमा प्रतिशतमा आधारित। फरक पर्दैन यदि यो एकल, डबल वा एक पैदल पनि थियो। बिली बीन पेशी हो ... महाप्रबन्धक जसले आफ्नो टोली र उसको क्यारियरलाई बेवास्ता गर्दछ अ well्कल्यान्ड एको ऐतिहासिक winningण जित्नको लागि।
म तपाईंको लागि कहानी बर्बाद गर्ने छैन, तर यहाँ एक सिंहावलोकन छ। ओकल्यान्ड एसँग प्रतिभा खरीद गर्न प्राय: टिमको बजेटको एक तिहाइ छ। प्रतिस्पर्धा गर्न, उनीहरूलाई केहि अरू चाहिएको थियो - विश्लेषण। बेसबल उद्योग कुनै पनि अन्य उद्योग जस्तै हो, यो उमेर, आकार र धन मा बढेको छ, संस्थागत ज्ञान गहिराइमा दगुर्छ। समस्या यो हो कि संस्थागत ज्ञान गलत छ ... धेरै गलत। खेलहरू सांख्यिकीय हिसाबले हिट र रनमा हराइन्छन्, त्रुटिहरूमा होइन, घरेलु रनहरू वा गोमांस, वर्ग-जावेद एथलीटहरूद्वारा जित्छन्। तपाईंको आफ्नै व्यवसाय र तपाईंले बनाउनु भएको धारणाहरूबारे सोच्नुहोस् किनभने यो थियो सधैं त्यो बाटो गरे।
मा समस्या एनालिटिक्स उद्योग दुई पट छ हाम्रो मार्केटिंग रणनीतिहरू हाम्रो साइट पछाडि विकसित भएको छ र प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रिया नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ (मोबाइल, भिडियो, ट्याबलेट, सामाजिक, आदि), जब तपाईं आफ्नो वेबमा लग इन गर्नुहुन्छ। विश्लेषण तपाईं धेरै धेरै हामीले केहि दशक पहिले देखेका थियौं। अर्को समस्या यो हो कि संस्थागत ज्ञानले उद्योगको धेरै जग नै विषाक्त पारेको छ। सबै पछिल्ला विश्लेषण र मापन उपकरणहरू उपयोगी छन् जुन विकास भइरहेको छ बाहिर उद्योग।
मार्केटिंग पेशेवरहरूको सफलता अक्सर बाउन्स रेटहरू, पृष्ठ दृश्यहरू, फ्यानहरू र अनुयायीहरूमा अनुमान गरिन्छ ... जब उनीहरूसँग वास्तविक व्यवसाय परिणामहरूमा बिल्कुल कुनै सांख्यिकीय प्रभाव पर्न सक्दैन। यो सत्य हो कि त्रुटिहरू र होमरन्सले बेसबल खेलको क्रम परिवर्तन गर्न सक्दछ, जस्तै पृष्ठ दृश्यहरूको उच्च मात्राले व्यवसायलाई असर गर्न सक्छ… तर प्रश्न यो हो कि यो प्रदर्शन ईन्डिकेसन हो कि तपाईं प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ।
के अन्ततः सबै व्यवसाय मा महत्वपुर्ण हो दुबै नेतृत्व र रूपान्तरण हो। कसरी सेट अप गर्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् विश्लेषण खाता पहिलो प्रश्न हो के डोमेन आफ्नो विश्लेषण स्थापना हुनेछ ?! त्यो हो गलत प्रश्न पूर्ण रूपमा, प्रश्न हुनुपर्दछ तपाईं कसरी ग्राहकहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ? त्यसोभए समाचार प्रश्न हुनुपर्दछ कि तपाईं तिनीहरूलाई कहाँबाट लिनुहुन्छ? र तपाइँ कति बढ्न चाहानुहुन्छ। त्यो बिन्दुमा, द विश्लेषण प्लेटफर्मले प्रत्येक स्ट्याट क्याप्चर गर्न मद्दत गर्दछ र कुन चीज महत्त्वपूर्ण छ र कुनमा फरक पर्दैन भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
हरेक विश्लेषण पेशेवर पढ्नु पर्छ मनीबल र उनीहरूको समझलाई पुनः आकार दिनुहोस् कसरी व्यापार अनलाइन परिणाम ड्राइव - चाहे यो प्रत्यक्ष बिक्रीको साथ एक इकमर्स साइट हो, वेब प्रकाशन जुन भ्रमणको आधारमा विज्ञापन राजस्वबाट राजस्व प्राप्त गर्दछ, एक सेवा कम्पनी जसलाई अपोइन्टमेन्टहरू चलाउन आवश्यक पर्दछ, एक टेक्नोलोजी फर्म जसलाई बढी वेब डेमो चाहिन्छ, वा कम्पनीले मात्र भावनालाई असर गर्ने कोसिस गर्दैछ। र यसको ब्रान्डको पहुँच।
वेब विश्लेषण एक ट्रिक पोनी हो ... एक एन्टिकेटेड टूलसेट फिट गर्न कोशिस गर्दै यी सबै नयाँ परिदृश्यहरूमा। हामीलाई एउटा चाहिन्छ नयाँ टूलसेट जुन परिदृश्यको साथ सुरू हुन्छ र कुनै पनि मध्यम वा प्लेटफर्ममा सफलता कसरी नाप्ने भनेर हामीलाई देखाउनुहोस्।
टैग: विश्लेषणव्यापार विश्लेषणरूपान्तरण अनुकूलनरूपान्तरणलक्ष्यहिट रनहरुइनबाउन्ड मार्केटिङनेतृत्व पुस्तासुराकीमनीबलमनीबल किताबMoneyball चलचित्रतथ्याङ्क
सानो व्यवसाय सामाजिक धोखाको पाना
जनवरी 23, 2012 मा 11: 02 एएम
यो एक महान कथा छ। एक उत्कृष्ट पुस्तक र राम्रो फिल्म बनायो। यो पनि सत्य होइन। बीनले स्टार प्लेयरहरूको कोर समूहलाई उत्तराधिकार दियो जुन सफल सीजनको स्ट्रिंगलाई मिलाउँदछ। त्यसका टिमहरू त्यसबेलादेखि ध्यानपूर्वक असफल भएको छ।
के मनीबलले वास्तवमा प्रदर्शन गर्छ कि मिडियामा एक ब्रान्ड निर्माण केवल वास्तविक प्रदर्शनसँग मात्र सीमान्त सम्बन्धित छ। के महत्त्वपूर्ण छ उपन्यास र रोचक कथा सिर्जना गर्न हो। मिडियाले कुनै पनि विवादास्पद तथ्यलाई बेवास्ता गर्दछ जबसम्म कि कसैलाई त्यो कथामा बाधा पुर्‍याउन रुचि हुँदैन।
जनवरी 23, 2012 मा 11: 18 एएम
पुस्तक वास्तवमा अन्तिम अध्याय मा उद्योग देखि पुशब्याक को कुरा गर्दछ र यसको थिसिस समर्थन गर्न केहि अतिरिक्त घटनाहरु प्रदान गर्दछ। यो निश्चित रूप मा देखिन्छ कि माइकल लुईस उद्योग भित्र केहि पंखहरु संग झुकाव छ। मलाई शंका छैन कि तथ्या .्कहरू "मात्र चीज" होइनन् जसले एक ठूलो टोली चलाउँदछन्। यांकीज जस्तो टोलीले केही महान प्रशिक्षकहरू, उत्कृष्ट खेलाडीहरू जुन क्लिन्चमा प्रदर्शन गर्न सक्थे साथ साथै अन्य सुविधाहरूको एक होस्टको प्रभुत्व राख्थे। असत्यको रूपमा सम्पूर्ण कथा बाहिर फाल्ने को रूप मा, म सम्मानपूर्वक तपाईं संग असहमत हुनेछ। ओकल्यान्ड एले खेलाडीहरूको विश्लेषण गर्न तथ्या .्कहरू प्रयोग गर्‍यो, र अन्य टोलीहरू पछि उनीहरूको नेतृत्व अनुसरण गर्न स्वीकार गर्दछन्।
जे भए पनि, यो कहानी हो जुन सामान्यतया व्यवसायसँग सान्दर्भिक छ। व्यक्तिहरू प्राय: तिनीहरूको अगाडि प्रमाणहरू हेर्नुको सट्टा मान्यताहरू बनाउँदछन्। त्यो कथाको नैतिकता हो।
जनवरी १, २०१ 25 १२::2012 अपराह्न
मेरो दुई जोश, बेसबल र सामाजिक मिडिया को बारे मा एक ब्लग पोष्ट? हो!
मनीबलको मुख्य सफलता को अधिक कुशलतापूर्वक निर्माण गर्न मूल्य निर्धारण सम्पत्ति लक्षित बारेमा हो। जबकि सबैजना ब्याटि average औसत, घरेलु रन र ईराको लागि भुक्तानी गर्दै थिए, बीनले ओबीपीमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको थियो। र बिन्दु धेरै मानिसहरु लाई याद गर्छन् कि Moneyball OBP वरपरको निर्माणको बारेमा छैन। यो एक मूल्याerv्कन गरिएको स्टेटको वरिपरि निर्माणको बारेमा हो। अब जब लीग समातिएको छ र OBP अधिक मूल्यवान छ, बीन समायोजन गर्न छ।
डिजिटल मार्केटिंगमा उही सत्य हो। सबैले आफ्नो समय र पैसा फेसबुक, ट्विटर र Google+ मा खर्च गर्न भन्दछन्। तर शायद मूल्याerv्कन गरिएको सम्पत्ति Pinterest हो, कमसे कम तपाइँको ब्रान्डको लागि, र यो तपाइँको लागि अधिक कुशल लगानी हुनेछ।
त्यसो भए सबैलाई अन्धाधुन्ध रूपमा घर रन र ब्याटि average औसतमा पैसा फ्याँक्न दिनुहोस्। तपाईं OBP (Pinterest) मा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ। यो सबै बजार अक्षमता को बारे मा छ।